Ikhasino Ye-inthanethi Engadingi Idiphozithi - 2022
Ikhaya / ikhasino ye-inthanethi engadingi idiphozithi
Ikhasino Ye-inthanethi Engadingi Idiphozithi
Abantu baseNingizimu Afrika abasibo abantu abangaziwa ngokuphila impilo yabo behamba. Akusiyo imfihlo ukuthi iningi labantu baseNingizimu Afrika lipheqa, lithenga futhi lidlala ngeselula. Akuhlukile uma kuziwa ekudlaleni imidlalo yasekhasino abayithandayo.
Yini engcono kunokuba kube lula ukukwazi ukudlala imidlalo yasekhasino behamba? Ukukwazi ukudlala imidlalo engadingi idiphozithi kuselula yakho!
Ngezansi kunamanye wamakhasino angadingi idiphozithi athandwa kakhulu atholakala kubadlali baseNingizimu Afrika.
Amakhasino Eselula aseNingizimu Afrika Angadingi Idiphozithi
Kungani Udlale Ekhasino Yeselula Engadingi Idiphozithi?
Kunezizathu eziningi ezenza ukuthi amakhasino angenayo idiphozithi athandwe kangaka. Nazi izizathu ezingu-3 eziyinhloko.
Anikeza abadlali abaqalayo nabadala ithuba lokuzama imidlalo emisha nezici zawo eziningi ngaphandle kokusebenzisa noma iyiphi imali abayisebenzele kanzima. Ngokusebenzisa ibhonasi yediphozithi engekho, uthola yonke injabulo ngaphandle kwezingozi, futhi ube sethubeni lokuwina imali yangempela.
Imidlalo Yabadayisi Ababukhoma imnandi kodwa ingesabisa uma ungaqinisekile ngokuphelele ukuthi isebenza kanjani noma uma ungakwazi ukuncintisana nabochwepheshe. Imidlalo Yabadayisi Ababukhoka ayitholakali ukudlala mahhala. Amakhasino eselula ediphozithi engekho akunikeza ithuba lokuzama le midlalo ethile ngaphandle kwezingozi ezithile. Futhi uthola ukwenza kanjalo ekunethezekeni kwanoma iyiphi indawo oyikhethayo, khona kanye kuselula yakho.
Indlela enhle yokusebenzisa amakhasino esesula angadingi idiphozithi ukuzijwayeza ukudlala imidlalo, njengeBlackJack, lapho ikhono lingaba yinto enqumayo. Uthola nethuba lokwenza isu lakho lemidlalo efana ne-Roulette libe ngcono. Ngokuzethemba kwakho kuphakeme futhi nesu lakho limi ngokuqinile, lapho-ke unganyuka uye ebangeni lokuwina imali eningi.
Amabhonasi Anikezwayo Amakhasino Eselula Angadingi Idiphozithi
Kungenzeka ukuthi wake wabona amabhonasi ediphozithi engekho amaningi anikezwayo uma uphequlula amakhasino e-inthanethi kanti amakhasino eselula asebenza ngendlela efanayo.
Lapho ubhalisela ikhasino okokuqala, qiniseka ukuthi wamukela futhi usebenzise ibhonasi yediphozithi engekho enikezwayo. Uzokwenyuselwa ukusebenzisa ikhodi yebhonasi ezokuvumela ukuthi udlale mahhala futhi uthathe imali yakho yangempela oyiwinile. Qiniseka ukuthi uhlola imigomo nemibandela ephelele uma kungenzeka kube nezimfuneko okudingeka uzifeze ngaphambili kokuthi ukwazi ukukhipha imali yakho oyiwinile.
Gxumela bese uzitika ngamakhasino eselula ambalwa ahamba phambili angadingi idiphozithi atholakala kubadlali baseNingizimu Afrika futhi uzwe injabulo ngaphandle kwezingozi ezithile!
Indlela Yokudlala Ekhasino Yeselula Engadingi Idiphozithi
Ukujabulela imidlalo ehlukahlukene yamakhasino ngaphandle kokufaka imali yakho engcupheni, kufanele ubhalise i-akhawunti yemali yangempela. Akufanele uhlanganise noma yimaphi amabhonasi ediphozithi engekho kanye nebhalansi yobumnandi, ngoba imodi yokufunda ayidingi ukubhaliswa futhi awukwazi ukuzuza imali ngokuyidlala. Ngeyokuzijabulisa nje. Ngakolunye uhlangothi, amabhonasi ediphozi engekho angase angabi makhulu, kepha uzoba nesamba esikhulu sokuzama yonke imidlalo futhi uma unenhlanhla, ungawina ngemali yamahhala.
Uma usuqinisekile ukuthi i-smartphone noma ithebhulethi yakho iyahambisana nekhasino oyikhethile, bhalisa ngayo bese kufinyelela ku-R300 efakwa kubhalansi yakho. Ukuqedela inqubo, kungadingeka ukuthi ufake ikhodi yekhuphoni enikezwe yikhasino futhi lapho nje uyifaka, imali yamahhala izobonakala ku-akhawunti yakho. Lokhu kumahhala kepha ngesikhathi esifnayo kuyimali yangempela, ngakho-ke kufanele uhlele isu lakho futhi ubheje ngokuhlakanipha ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngokugcwele.
Bheka imigomo nemibandela yekhasino oyikhethile ukuthola izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali ezibekwe indawo ethile yokudlala futhi uma uhlangabezana nazo, ungakwazi ukukhipha izimali ozitholile kubhonasi yakho yediphozithi engekho.
Imidlalo Ongayikhetha Ekhasino Yeselula Engadingi Idiphozithi
Kunemidlalo, ngakho-ke noma ngabe ufuna ukudlala ama-reel noma amakhadi, ungawuthola umdlalo owuthandayo. Ungasebenzisa ukheshi wakho wamahhala ukuzama izici zebhonasi zemishini yokugembula yeselula ebandakanya eyakudala, yevidiyo nenemali ethuthuka njalo. Khetha ukubheja inani eliphansi futhi ungajabulela ama-spins amaningi angaholela ekuhlanganeni kokuwina okwandisa ibhalansi yakho. Iningi lemishini yokugembula ikunikeza izikhathi zokudlala mahhala ezingenye ithuba lokunqoba ungafakanga imali yakho siqu engcupheni.
Nakuba ukuwina ngemishini yokugembula kuncike kakhulu enhlanhleni yakho ngenxa yemiphumela engahleliwe yemidlalo, amabhonasi ediphozithi engekho angasiza kakhulu uma kukhulunywa ngemidlalo yetafula edinga ikhono nesipiliyoni. Sebenzinsa imali yamahhala ukubheja i-blackjack futhi ufunde ukuthi ungafinyelela kanjani ku-21 noma uqhamuke nesu elisebenza kahle kakhulu kumidlalo ye-poker ne-roulette. Noma ungaba nentshisekelo yokudlala izinhlobonhlobo ze-poker ngenkathi uhamba? Zonke ziyatholakala emakhasino eselula angadingi idiphozithi.
Kunezindawo eziningi zemidlalo yeselula ezihlinzeka ngemidlalo yetafula yabadayisi ababukhoma lapho ungasebenzisa khona imali yakho yamahhala futhi ufunde izindlela zokudlala ngenkathi ujabulela isimo sangempela sekhasino eyakhiwe esisakazwa ngqo kuselula noma kuthebhulethi yakho. Khumbula ukuthi inzuzo enkulu yokusebenzisa ibhonasi yakho yediphozithi engekho emakhasino eselula yithuba elinikeziwe lokusondela emidlalweni yawo futhi ubona ukuthi zisebenza kanjani futhi zikhokha kanjani ungekho engozini yokulahlekelwa yimali yakho. Futhi, konke okuwinile kungagcinwa futhi ukukhiphe uma ufinyelele izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali.